Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ : डा. गौतम - Pnpkhabar.com
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ : डा. गौतम
काठमाडौं, ९ पुस : स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपाल ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले मिडियासँगको कुराकानीमा भनेका छन्, कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपाल ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । कानुनी समस्याहरु हटिसकेका छन् । औषधि ऐनमा परिवर्तन गरिएको छ । रकमको समस्या हुँदैन । अब मुख्यतया चार वटा विषयमा क्लियर हुन आवश्यक छ । पहिलो हामीलाई चाहिने जति डोज खोप पाउनु पर्यो । दोस्रो भनेको सस्तो मूल्यको हुनुपर्यो । तेस्रो जुन देशबाट हामीले खोप ल्याउँछौँ, त्यो देशमा खोप लगाइसकेको हुनु पर्यो । र चौथो भनेको हाम्रो चिस्यान प्रविधिलाई ध्यान दिनुपर्यो । यी कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालमा खोप ल्याउने हो ।
सबै नागरिकलाई एकैपटक खोपको उपलब्धता हुन सक्दैन । १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि खोप अहिले उपलब्ध हुन सक्दैन । विश्वमा कतै पनि १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुको लागि कोरोनाको खोपको परीक्षण गरिएको छैन । ‘कोभ्याक्स सुविधा’ मार्फत् २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप नेपाल ल्याउन लागिएको छ । यो संयन्त्रमार्फत् नेपालसहित १ सय ५० वटा देशका २० प्रतिशत नागरिकले खोप पाउँछन् । कोभ्याक्स सुविधामार्फत् खोप आउने लगभग पक्का जस्तै छ । बाँकी खोपहरु ल्याउनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले खोप ल्याउने प्रक्रियामा केही पनि असर गर्दैन । खोप ल्याउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ । खोप ल्याउनका लागि दुईवटा मोडालिटी तयार पारिएको छ । एउटा सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ । अर्को विदेशी सहयोग । अहिले पीपीई किन्न, कोरोना परीक्षण गर्न र भेन्टिलेटर तथा आईसीयूका लागि विदेशी सहयोगहरु आइरहेको छ । त्यसको २० प्रतिशत पनि खोपमा खर्च गर्ने भनिएको छ । अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ । धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको पैसा अब खोपमा खर्च गर्नुपर्छ । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितीले खोप ल्याउने र लगाउने कुरामा कुनै असर पार्दैन ।
खोप मात्रै कोरोनाको समाधान होइन । कोरोना सर्नबाट बच्न खोपभन्दा मास्क राम्रो हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । खोप लगाइसकेपछि पनि खोपले शतप्रतिशत कभर गर्दैन । ८० देखि ९० प्रतिशतलाई मात्रै कभर गर्छ । बाँकीलाई कोरोना सर्ने सम्भावना भइरहन्छ । शतप्रतिशत नै खोप लगाएको रेकर्ड विश्वमा कतै पनि छैन । नेपालमा पनि ८० देखि ८५ प्रतिशतले मात्रै खोप लगाउने हो । बाँकीलाई रिस्क रहिरन्छ । खोपलाई मात्र विचार गर्ने होइन । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्छ । मास्क खोपभन्दा धेरै राम्रो हो ।मास्कलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।